3. Na ọtụtụ mmịpụta ụdịdị nke kwesịrị ekwesị ka ọtụtụ ụdị mmepụta.
4. Site na ntinye aka nke njikwa akara PLC, igwe a nwere ike igosipụta koodu ọdịda, na-eme ka mmezi ahụ dịkwuo mfe.
5. A na-ebubata akụkụ niile dị mkpa n'ụzọ zuru ezu iji kwalite ịdịte aka.
6. A na-ebubata akụkụ ndị bụ isi na eletrik eletrik na ọnụ ọgụgụ dị ala na ogologo ndụ ọrụ.
7. A na-anakwere ogwe aka njikọ nke ọtụtụ mmanya maka ike ibu ike; A na-ejikwa moto na-ebelata mbubata, nke PLC na-achịkwa ya na ihe ntụgharị ugboro ugboro maka ịrụ ọrụ kwụsiri ike na enweghị mmetụta na oke ọsọ.
8. N'ihi na ojiji nke mbenata moto mbanye ogwe aka PLC na ugboro Ntụgharị, ogwe aka nwere ike kwụsị n'ebe ọ bụla n'ime ya njem nso (ogwe aka na-aga n'ihu na nsọtụ ebu n'ihu maka ichere tupu ebu meghere), ka n'ụzọ dị irè ebelata. oge mmịpụta, si otú a na-emeziwanye mmepụta mmepụta ihe.
9. A na-anakwere ihuenyo mmetụ aka nke igwe igwe n'asụsụ Chinese ka o wee tọọ paramita dị iche iche nke ọma ma na-eduzi nlekota oge n'elu ọkwa igwe. Ọzọkwa, a na-enye ọrụ ngosipụta nke nchọpụta onwe onye mejọrọ iji mee ka ọrụ ma nrụzi dị mma.
10. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ na-akpaghị aka ma ọ bụ jikọọ ya na igwe na-efu efu, igwe nri na onye na-ewepụta ka ọ bụrụ ngwaọrụ zuru oke.
11. A na-eji ihe ngbanwe uru zuru oke nke Japan mee mgbanwe mgbanwe ọnọdụ ogwe aka.
Nke gara aga: Auto sprayer maka oyi ụlọ anwụ nkedo igwe
Osote: Ngwakọta akpaaka onye ntọhapụ maka igwe oyi akwa anwụ
Nkọwa/ihe nlereanya TE-1# TE-2# TE-3# TE-4#
Igwe ihe nkedo anwụ dabara adaba 125T-200T 250T-400T 500T-580T 630T-900T
Dayameta Gripper Φ40-80mm Φ40-80mm Φ50-90mm Φ60-110mm
Ike ịdọrọ 68KGF 68KGF 98KGF 98KGF
Ebe enwere ike ịhazigharị n'ebe ịdọrọ ụzọ 200mm 200mm 250mm 250mm
Ịdọpụ anya 250mm 250mm 300mm 300mm
Isi iyi ikuku 6kgf/cm2 6kgf/cm2 6kgf/cm2 6kgf/cm2
Ike njigide 3KG 4KG 6KG 10KG
Ụgbọ ala moto 0.75KW 0.75KW 1.5KW 1.5KW
Ụzọ edoziri Ụdị ala
Ngosipụta nkọwapụta 1200*750*1200mm 1300*750*1200mm 1450*750*1300mm 1550*750*1350mm
Ibu nke Igwe 435KG 450KG 553KG 580KG
Igwe na-ewepụta akpaaka
Robot onye na-ewepụta ihe